Novonjen’ny Hetsi-panoherana Tao Italia Tamin’ny Fanapahana Ireo Hazo Mihoatra ny Zato Taona Anjatony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2017 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Français, Nederlands, Español, 繁體中文, English
Niainga avy tamin'ny sombin-dahatsoratr’i Rachel Hubbard ho an'ny 350.org, fikambanana nanangana ny hetsika manerantany mikasika ny toetr'andro, ity lahatsoratra ity ary navoaka eto indray ho anisan'ny fiaraha-miasa amin'ny Global Voices.
Ny TAP sy ny Southern Gas Corridor no tetikasan'akoranafo milevina lehibe indrindra izay trandrahan'ny Vondrona Eoropeana. Fantatra fa hitondra etona an'arivony miliara metatra toratelo mankany Eorôpa izany kanefa tsy mifanaraka amin'ny andraikitra ifanarahana mikasika ny toetr'andro ao Eoropa. Araka ny tatitra nataon'ny Tsenan'ny Solika Iraisampirenena, efa namoaka karbônina mihoatra noho fetra, nifanarahan'i Eoropa sy ny fitondram-panjakana manerana izao tontolo izao tamin'ny Dinan'ny Toetr'andro tao Paris, azo avoaka ny fanodinana ny akoranafo milevina tsy hiakaran'ny hafanana manerantany. Midika izany fa tokony tsy hisy ny toerana hanaovana tetikasan'akoranafo milevina vaovao, ary indrindra fa amin'ny fotodrafitrasa amin'izao habeny izao, izay mikendry ny hanitarana bebe kokoa ny tsenan'ny etona any Eoropa.
Tamin'ny 20 Martsa, nitsangana ny tsatoka rehefa nanomboka nanala ireo hazon'oliva fahiny an-jatony teo akaikin'ny kaominina ambanivohitr'i Melendugno ny orinasa hanangana ny fantsona izay tsy nanana fahazoan-dalana hanao ny asa, araka ny notsikerain'ny ben'ny tanàna tao an-toerana sy ny filohan'ny faritra ao Apulia. Zava-dehibe amin'ny fiveloman'ny olona maro ireo hazo ireo. Tsy izay ihany, fa sarobidy ho an'ireo olona ao an-toerana ihany koa ary efa naniry teo an-jato taonany maro (mihoatra ny arivo taona aza ny sasany amin'izany) .
Mitohy isan'andro ny famoriam-bahoaka sy ny fivoriana ho an'ny besinimaro. Tsy misy mahalala izay zavatra hitranga manaraka kanefa tapa-kevitra tanteraka ny hampitsahatra ny TAP ny Komitin'ny “Tsy mila TAP” ao an-toerana. Milaza hatrany ry zareo fa tsy ilaina ny tetikasa, indrindra satria nihena ny tinady etona any Eoropa, ary tsy manaraka ny fomba demaokratika ihany koa ny fanorenana no sady noteren'ny governemanta atao na dia tsy eken'ny olona ao an-toerana aza. Milaza ihany koa ry zareo fa hiteraka olana ara-toekarena sy fahasimbana ara-tontolo iainana lehibe izay tsy ho azo harenina ao amin'ny faritra izany .
Azonao arahina ao amin'ny Twitter ny fanentanana miaraka amin'ny tenirohy #NoTAP. Ao amin'ny Twitter @no_tap sy ao amin'ny Facebook @MovimentoNoTAP ny komity mpikarakara ao an-toerana. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny TAP, izay antsoina ihany koa hoe ny Fantsona Goavambe Eoro-Kaspianina, dia jereo ny fanadihadihana ao amin'ny tranonkala Walking the Line izay nataon'ny vondrona mpanentana Counter Balance, Platform London ary Re:Common.